Nharembozha Kushambadza Kwadzoka MuVogue - MaBrands Angaite Sei Otomatiki Uye Kuwedzera-Kusimudzira Nharembozha Mishandirapamwe? | Martech Zone
Wese munhu anogamuchira ubiquity yenharembozha. Mumisika mizhinji nhasi - kunyanya munyika dzichiri kusimukira - haisi nyaya chete nhare kutanga asi mobile chete.
Kune vatengesi, denda rakawedzera kufambisa kuenda kudhijitari panguva imwe chete iyo kugona kunanga vashandisi kuburikidza neyechitatu-bato makuki kuri kubviswa.
Izvi zvinoreva kuti yakananga nharembozha yatonyanya kukosha, kunyangwe mabhureki mazhinji achiri kusungirirana pamwe chete akasiiwa uye akasiyana ekushambadzira mishandirapamwe inovhara zvine hungwaru musiyano pakati pechinyakare online uye. nhare kutanga nzira.
Kune akawanda marwadzo mapoinzi, kunyanya kushaikwa kweinowirirana mushandisi ID pamapuratifomu akasiyana uye chiteshi. Mushandisi wekupedzisira anowanzo pedzisira anyanya-spammed, uye meseji yemhando yacho inopedzisira yave isingaenderane - kana kurasika zvachose.
Kumusoro kwakagadzira zvayo kura mobile marketing platform mukuda kugadzirisa nyaya idzi. Yakafumura chikuva sezvo denda reCCIDID-19 rakashandura pasi rikaita kuti kubatanidzwa kwedhijitari kuve chinhu chakakosha kwete kunakidzwa kumabhizinesi mazhinji.
Saka Chii Kukura?
Ngatitangei nezvinokosha. Kura ipuratifomu yekushambadzira yedhijitari inoita kuti masangano akwanise kuendesa akawanda-channel kubatanidzwa kwevatengi, kunyanya kuburikidza nenharembozha, vachishandisa nzira dzakadai senharembozha, SMS, RCS, zviziviso zvemidziyo uye masocial network. Inopihwa seyako-sevhisi chikuva chekushambadzira otomatiki. Nekudaro, Upstream zvakare ine inofambiswa sevhisi inopa, iyo inoshanda nemazvo mumamiriro ezvinhu apo vatengi vasina yekuwedzera bandwidth kana hunyanzvi hwekumhanyisa mishandirapamwe yekushambadzira yedhijitari.
Chikuva chine chinangwa chekuva a imwe-mira-shopu zvemhando. Iyo inounza pamwe chete kusikwa kwemukati, otomatiki yemushandirapamwe, analytics, ruzivo rwevateereri, kudzivirira hutsotsi hwekushambadzira uye kugona kwekutungamira kwechiteshi mupuratifomu imwe.
Danho rekutanga kugadzira kuburikidza ne Campaign Studio uko vatengi vanogona kugadzira nzendo, dzakawanda-chaneli nzendo, pasina ruzivo rwekodha. Icho chiitiko chine intuitive, kushandisa kudhonza uye kudonhedza kuvaka, kugadzirisa uye kuona chero ruzivo rwemushandisi.
Kunotevera kunouya chiyero. The Marketing Automation chishandiso chinobvumira masangano kuti aite otomatiki kuyerera kwekushambadzira pamutengi kuti awane nzira dzekutenga dzakagadziridzwa, kuitira kuti kushambadzira pachiyero kuchiri kunzwa kwakakosha, kuchiziva-nekuziva uye pachako.
The Kutarisira Vateereri inobvumira mabhizinesi kuunza, kutonga, kutsanangura, kuongorora uye kumisa data revatengi kuti riite rakanyatsojeka rekuita mushandirapamwe iro rinopfuura ekutanga data seti kuitira kuti bhajeti rigogoverwa zvirinani.
Uyezve pane iyo Insights uye Analytics zvinhu, izvo zvinoumba musana weKukura chikuva. Nekuisa huwandu hukuru hwe data kushanda, mabhizinesi anogona kukwenenzvera mishandirapamwe kuti awedzere kushanda nekufamba kwenguva nekuunganidza ruzivo rwekuita, kuita, churn, mari nezvimwe.
Dziviriro kubva kuhutsotsi hunouya kuburikidza neSecure-D, Upstream's anti-hutsotsi ficha, iyo inodzivirira kubva mukubiridzira kwekushambadzira uchishandisa yakavakirwa-mukati yekufungidzira ad kuvharika, maitiro ekudzivirira maitiro, kubhadharisa kubhadharisa maitiro, hutachiona zviziviso, calibration, kuongorora chiitiko uye yakachengeteka interface.
Ndiko kupindirana kwese. Zvino ngatitarisei kuti chikuva chiri kushandiswa sei nemhando dzemberi dzinofunga.
Nekuparara kweyechitatu-bato makuki padhuze, yakakurumbira doro brand yaifanira kutanga kugadzira hukama hwakananga nevatengi mune imwe yemisika yayo yakakosha - Brazil. Mukutarisana neshanduko yakadaro brand yaida kutanga kuvaka arsenal ye yekutanga-pati data, saka inogona kugadzira nzira yakatwasuka yekubatanidza vateereri uye kusimudzira zvinopihwa - uye kugovera zvirinani bhajeti rayo rekushambadzira.
Nokushandisa i kura papuratifomu, iyo mhando yakakwanisa kuwana iyo yekunyoreswa base yemukuru weBrazil nhare opareta - ichipa 50MB yemahara data data mukutsinhana neruzivo rwavo. Mukati mevhiki, yakanga yagadzira zvinopfuura 100,000 inotungamira. Izvi zvakaipa dziva rakakura retarisiro yayaigona kuita pamwe nekutumira kukwidziridzwa uye nekuvandudza kugona kwayo kwekushambadzira mudunhu.
Mumwe mutengi, anotungamira nharembozha muSouth Africa, aifanira kuwedzera kutorwa kwesevhisi yake yekutepfenyura mimhanzi mumusika wemuno. Nekudaro, mushandisi aive akatarisana nekutora kwevatengi uye nenyaya dzekuita mari sezvo kushambadzira kwekutanga kushambadzira kwanga kusina kuita zvakanaka. Nenguva yakareba, yaida sevhisi nyowani kukwikwidza musoro-kune-musoro neSpotify neApple Music uye kuve sevhisi huru yekutepfenyura mimhanzi yesarudzo muSouth Africa.
Mumwedzi mitatu yekutanga yemushandirapamwe, mushandisi akaona kuwedzera kunoshamisa kwe4x mune inoshingaira mushandisi base yemimhanzi yayo yekufambisa sevhisi. Mukati memushandirapamwe wemwedzi misere, vanyoreri vatsva vangangosvika mamirioni maviri (8 miriyoni) vakaunzwa kubasa. Mumwedzi misere chete, mhando yacho yakanga yashandura yemhando yepamusoro - asi isingaite - sevhisi yedhijitari kuita sosi yakasimba yekuwana mari inodzokororwa uye mutungamiri wemusika munzvimbo.
Muchidimbu, chinangwa cheKura ndechekuita kuti kushambadzira kwenhare kuve kukuru zvakare, kupa vashandisi rwendo rwakakura kwazvo rwevatengi, rwakanangana nehunhu hwavo uye zvavanoda, zvichiunza kugona kwekushambadzira kumatanho matsva emabhizinesi. Iyi puratifomu yakaratidza kupa 3x mareti ehurukuro uye 2x mareti ekubatikana achienzaniswa neyechinyakare dhijitari mushandirapamwe, ine zero kudiwa kwekudyara kwepamberi.
Uku ndiko kushambadzira kwenhare kunoitwa nemazvo.
Upstream ikambani inotungamira tekinoroji mumunda wekushambadzira nhare mumisika yakakosha iri kusimukira pasirese. Yayo nharembozha yekushambadzira otomatiki chikuva, Kura, yakasarudzika murudzi rwayo, inosanganisa hunyanzvi mumunda wekushambadzira otomatiki uye data, chengetedzo kubva kuhutsotsi hwekushambadzira kwepamhepo, uye kutaurirana kwedhijitari kwakawanda kune chinangwa chekugadzira zviitiko zvemunhu zvevatengi vekupedzisira. Neanopfuura 4,000 akabudirira ekushambadzira mafoni ekushambadzira, iyo Upstream timu inobatsira vatengi vayo, vanotungamira mabhureki pasi rese, kutaurirana zvinobudirira nevatengi vavo, kuwedzera kutengesa kwedhijitari uye kuwedzera mari yavo. Kumusoro mhinduro dzakanangana nevatengi 1.2 bhiriyoni munyika dzinopfuura makumi mana neshanu muLatin America, Africa, Middle East neSoutheast Asia.
Tags: apple musicmaitiro ekuvharisayekutanga-patikukuramhani migeromobile vateereri manejimendimobile behavioral datakuronga nharembozhamobile channel orchestrationmobile churnmobile kugadziramobile demographic dataMobile devicenhare yekuitanhare kutangamuvaki werwendo rwenharemobile kpimobile kpismobile marketingnhare yekushambadzira michinamobile marketing automation platformnharembozha dzekushambadziramobile performance datamobile portalmobile kusunda noticesmobile retargetingmobile moneymobile mibayironharembozhamobile segmentationnharembozhanhare yakanangwamobile transaction datamumhanzikufanotaura ai kuvhariraspotifynechokumusoro kwerwizikumusoro kwemvura kukura
Dimitris Maniatis akabatana nechokumusoro kwerwizi muna 2017 kuenda kumusoro Secure-D. Pasi pehutungamiriri hwake Chengetedzwa-D yakakura ikava yekuhwina-kuhwina, mutakuri-giredhi yekuchengetedza chikuva, inovimbwa nevashandisi venharembozha pasirese. Akave Upstream CEO muna Ndira 2020 uye akabudirira kutungamira shanduko yekambani kuita nharembozha yekushambadzira. Asati ajoina Kumusoro, Dimitris aive mukushambadzira kuburikidza ne'zvinhu zvese webhu', iyo dijitari yekushambadzira agency yaakavamba mu2009.